အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း – မေလ ၂၀၁၅ ( အတာဧရာဝတီ?) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Editor's Notes » အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း – မေလ ၂၀၁၅ ( အတာဧရာဝတီ?)
အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း – မေလ ၂၀၁၅ ( အတာဧရာဝတီ?)
Posted by kai on Apr 14, 2015 in Editor's Notes, Myanmar Gazette | 36 comments
အတာဧရာဝတီ မေလ အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း မြစ်ဆုံဆည်
အတာသည် အန္တ္တ၊ သင်္ကြန်သည် သင်္ကန္တဟူသောပါဠိမှလာ၍ အဆုံးရောက်၍ကူးပြောင်းခြင်းဟုအဓိပ္ပါယ်ရသည်။ နှစ်အကူးအပြောင်းတွင် နှစ်ဟောင်းကိုဆေးကြော၍နှစ်သစ်ကိုအေးချမ်းခြင်းအားဖြင့်ကြိုဆိုရန် မြန်မာတို့ရေလောင်း ပက်ဖြန်းဓလေ့ ပြုခဲ့ကြသည်။
အတာသင်္ကြန်ပွဲသည် ဟိန္ဒူအယူဝါဒမှလာသည်ဖြစ်ကာ မြန်မာ့ဓလေ့ရိုးရာတွင် ဟိန္ဒူအယူအားကောင်းခဲ့သောပျူခေတ်ကတည်းက ရှိနေမည်ခန့်မှန်းရပါသည်။
မိဘုရားစောလုံအပေါ် သင်္ကြန်ရေလောင်းခြင်းအားဖြင့် အကျီစားသန်ခဲ့သည့်အတွက် မင်းအပေါ်အမျက်သိုကာ အဆိပ်ခတ်လုပ်ကြံသည်အထိဖြစ်သွားခဲ့ရသော ပုဂံခေတ်၊ နရသီဟပတေ့မင်း(၁၂၅၄-၁၂၈၇)၏ဇတ်လမ်း အမှတ်ရကြပါလိမ့်မည်။
ဆရာကြီး သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း၏ပုဂံရာဇ၀င်လေးချိုးကြီး၌လည်း အောက်ပါအတိုင်းစပ်ဆိုကာ သတိပေးဖူးသည်။
“ဒေါပုံအလှည့်သံသရာ ရေအပြင်မှာ ကြွားသူတို့ကဖြင့်၊
သဘောမဆုံသနဲ့ မခံချင်ပါလျှင်လဲ မကစားကြလေနဲ့၊
“စောလုံစောင့်ပါခလှည့်”ဟု တမ်းတမ်းတတ နောင်တစကားသည် မြန်မာတို့ သမိုင်းဝယ်မှတ်တမ်းမှတ်ရာအဖြစ် ပထမဆုံးကျန်ရစ်သည့် သင်္ကြန်ခြေရာဖြစ်ပေသည်။
ယခုခေတ်သင်္ကြန်သည်ကား စောလုံကို ရွဲ့၍လုပ်နေသည်ထင်ကြရလောက်အောင် အကျီစားသန်ကြသည်။ ရန်လည်းများကြသည်။
သင်္ကြန်သည်ကာလနှင့်အတူ သင်္ကန္တဖြစ်ခဲ့လေပြီ။ ပွဲတော်တွင်းလူထူထပ်သည်ကိုအကြောင်းပြုကာ ဈေးကွက်စီးပွားရေးဖြင့် ကြော်ငြာသင်္ကြန်ဖြစ်ခဲ့လေပြီ။
နှစ်ကူးတန်ခူးလအချိန်ကား ‘တန်ခူး ရေကုန်၊ ကဆုန် ရေခန်း’ ဆိုရိုးစကားအရ ချောင်းရေ ကန်ရေခြောက်ခန်းလုမတတ် အပူရှိန်ပြင်းချိန်တွင်မှ ရေချိုရေသန့်တို့ကို ပိုက်ကြီး/ငယ်အသွယ်သွယ်ဖြင့် တိုးကာထိုးကာ ပက်သည်။ ရေပက်ခံတို့သည်လည်း အရွဲရွဲအစိုစို၊ အလဲလဲအပြိုပြို။
လူငယ်တို့သည် စိတ်တွင်းပိတ်ဆို့ကာဆီးနေသမျှကို ဖွင့်၍ဖေါက်ထွက်နေကြသလားဟုပင်ထင်ရ၏။
ခေတ်၏စီးကြောင်းတွင် အခြေအနေအချိန်အခါပေး၍ ယဉ်ကျေးမှုမူလသဘောအရ စီးမြောပြောင်းလဲနေကြသည်ကို အထူးတလည်မဝေဖန်လိုပါသော်ငြား မြန်မာပြည်၏နွေခေါင်ခေါင်ဧပြီလတွင် မြို့ကြီးမြို့ငယ်ကားလမ်းများဝယ် တသွင်သွင်စီးဆင်းပြုန်းတီးကုန်နေသော ရေချိုများအတွက်မူ ပြောရန်ရှိလာပါသည်။
ထိုရေချိုတို့ ဘာကလာသနည်း။ ဘယ်နယ်သွားမည်နည်း။
“Climate change isafact” ဟု သမ္မတအိုဘားမားဆိုပါသည်။ အာတိတ်စက်ဝိုင်းတလျှောက်နှစ်သိန်းသောင်းချီအေးခဲနေခဲ့သည်ရေခဲပြင်ကြီးများ တ၀ုန်းဝုန်းအရေပျော်ကျနေ၏။ ပင်လယ်ရေလည်းမြင့်ခဲ့သဖြင့် ယူအက်စ်သမုဒ္ဒရာကမ်းနားပြည်နယ်အချို့ ပြင်ဆင်နေကြရပြီ။
ရေရှား/ရေကြီး၊ နှင်းခဲသွန်းကျ၊၊မုန်တိုင်းဝင်ကြမ်း စသဖြင့် မိခင်သဘာဝ ဟန်ချက်ပျက်နေသည်ကို ကိုယ်တိုင်စီကခံစားမြင်နေကြရသည်။
လူသားတို့သည် ဘ၀လူနေမှုအဆင့်မြင့်မားရေးအတွက်ရည်ရွယ်ရင်းနှစ်ရာချီကာ သဘာဝတရားကို မုဒိမ်းကျင့်ခဲ့ကြသည်။ လူနှင့်သတ္တ၀ါတို့ရှင်သန်ရေးတွင် အရေးအကြီးဆုံးမှာ လေနှင့်ရေဖြစ်ပါ၏။ ထို၂ပါးသာရှိလျှင် စကြ၀ဠာတွင်းဂြိုလ်တို့တွင် သက်ရှိဖြစ်တည်နိုင်သည်ဟုလည်းဆိုသည်။
သို့သော်လူတို့သည် လေထုကိုညစ်နွမ်းအောင်လုပ်ခဲ့ကြသဖြင့် ကမ္ဘာ့အပူချိန်တက်၍ ပူနွေးလာမှုနှင့်ကြုံကာ ဥတုရာသီဖောက်ပြန်ခြင်းတို့နှင့်တွေ့ကြပေပြီ။
တကယ်တော့ မနုဿလူသားဟူသည် ကာမတဏှာအလွန်ထကြကာ ကျား/မအချိန်ဒေသမရွေးဆက်ဆံလေ့ရှိသဖြင့် ကမ္ဘာမြေပေါက် သတ္တ၀ါတို့ကြားတွင် မျိုးပွားတိုးပွားနှုန်း မြန်စွာဖြင့် ဦးရေ ၇.၃ဘီလီယံသို့ရောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့အားဖြင့် ကမ္ဘာရေအရင်းအမြစ်တို့အား သုံးစွဲမှုသည်လည်း ကုန်လွန်ခဲ့သော နှစ်၅၀အတွင်း၃ဆတိုးလာသည်။ လူ့ခန္ဓာကိုယ်၏ ၇၀ရာခိုင်နှုန်းသည် ရေဓာတ်ဖြင့်တည်ထားသည်မဟုတ်ပါလော။ ကမ္ဘာ့မျက်နှာပြင်၏ ၇၁ရာခိုင်နှုန်းသည် ရေထုပြင်ကြီးဖြစ်ပါ၏။
သို့သော် လူတို့လက်ငင်းယူသုံးစွဲနိုင်သော ရေချိုထုသည် ကမ္ဘာ့ရေထုအားလုံး၏ သုညဒသမ ၃၁၉၁ရာခိုင်နှုန်းသာရှိပေရာ အဆိုပါရေအရင်းအမြစ်ကို နှစ်တိုင်း ခုန်ပြန်တိုးလာသောလူအင်အားဖြင့်သုံးစွဲကြသည်ရှိပါသော် မကြာမှီနှစ်ကာလတွင် ရေပြသနာကို ကြီးစွာရင်ဆိုင်ရမည့်သဘောရှိသည်။ လူသားဖြစ်တည်မှုကိုထိမ်းကြောင်းထားသော ကံစိတ်ဥတုအဟာရလေးပါတွင် ဥတုနှင့်အဟာရတို့ပျက်လုလုတည်း၊
ဤကမ္ဘာမြေ၀ယ်ရေအရင်းအမြစ်ဟူသည် အသစ်တဖန်ဖြစ်တည်လာခြင်းမရှိနိုင်သည့် ပုံသေပမာဏစွမ်းအင်တခုသာဖြစ်လေသည်။
“Today we are standing on dry grass where there should be five feet of snow.”ဟုပင်ကယ်လီဖိုးနီးယား ဂါဗနာမှ ယခုလဆန်းကထုတ်ပြောလိုက်ရသည်။ နောင်လာမည့်နှစ်များအတွက်လည်း ထည့်တွေးတွက်ခါ ပြင်ဆင်ကြ၊ ဥပဒေသစ်ပြုကြရပြီ။ ရေငန်ကိုရေချိုဖြစ်ချက်မည်လော။
ရေအရင်းအမြစ်၈၀%မျှကို သုံးပစ်လိုက်သော အလယ်ပိုင်းတောင်ဝှမ်းကယ်လီဖိုးနီးယားဒေသသီးနှံစိုက်ခင်းများအား ရေချိန်ဆဖြတ်တောက်မည်လော ဥပဒေပြုနေကြရလေပြီ။
ကယ်လီဖိုးနီးယား၏ရေဝေရေလဲဒေသသည် အရှေ့ဖက်မှ ရော့ကီးတောင်တန်းများ။ စီရာနီဗားဒါးတောင်တန်းဒေသများဖြစ်ပါ၏။ ထိုတောင်တန်းများတွင် တဆောင်းတွင်းလုံး ဆီးနှင်းခဲများ ပေပေါင်းများစွာထူထပ်ရအောင်စုခဲထားရပြီး တနွေလုံးတအိအိတစိမ့်စိမ့် ရေချိုအဖြစ် ဖျော်ချပျော်ကျရာမှမြစ်ချောင်းအင်းအိုင်တို့ စီးဆင်းလာကာ သံသရာလည်ကြရသည်။ အဆိုပါရေချိုတို့ ပင်လယ်တွင်းသို့ အလဟဿမထွက်သွားအောင် ဆည်ဖို့၊ကန်တား လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပင်အပိုထုတ်ယူကြသည်လည်းဖြစ်၏။
ပြည်နယ်၏အနောက်ဖက်တလျှောက်ရှိနေသော သမုဒ္ဒရာရေပြင်ကိုလှမ်းမျှော်ကြည့်၍သုံးပစ်နိုင်သည်။ ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင်ငွေရှိသည်။ ငွေသည် ရေငန်ကို ရေချိုအဖြစ်ပြောင်းနိုင်စွမ်းရှိသည်။ ယခုပင်လျှင် ဆန်ဒီယေးဂိုဒေသတွင် ဒေါ်လာ ၁ဘီလီယံမြုတ်နှံကာလာမည့်နိုဝင်ဘာတွင်ဖွင့်ပေးနိုင်ဖွယ်ရှိသည့် သမုဒ္ဒရာရေငန်ကို ရေချိုပြောင်းစက်ရုံဆောက်နေပါပြီ။
လက်တွေ့လည်း ကိုလိုရာဒို၊ ယူတား၊ အာရီဇိုးနား၊ နီဗားဒါး၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်တို့သည် သူတို့ကိုဖြတ်သန်းစီးဆင်းလာသော ကိုလိုရာဒိုမြစ်ကြီးအား ပြည်နယ်အရေးအားအပြန်အလှန်စွက်ဖက်ကြခြင်းမရှိ ဆိုင်ရာခွဲတမ်းတို့ဖြင့် တစက်မကျန်အောင် စုတ်ယူယူငင်သုံးစွဲထားပြီးဖြစ်သတည်း။
နိုင်ငံ၂ခု၊ ပြည်နယ် ၇ခုကိုဖြတ်ကာ အဆင်းဆင့်စီဆင်းလာသော ၁၄၅၀မိုင်ရှည်ကိုလိုရာဒိုမြစ်ကြီးခမြာ (၄၄)ခုသော ဆည်ကြီးများဖြင့် ထိမ်းချုပ်သိုလှောင်ကာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလည်းထုတ်ပေးလိုက်ရရှာသေးသည်။ အသိမြင့်လူတို့စွမ်းအားကား အံ့ခမန်းပင်..။
တိုးတက်နေသည်ဆိုသောနိုင်ငံကြီးတို့သည် ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုတရားခံ မှန်လုံသတ္တိပြ ဓာတ်ငွေ့များထုတ်ခဲ့ပြီ၊ တောကြီးများခုတ်၊ တောင်ကြီးများဖြို၊ လမ်းကြီးများဖေါက်၊ မြို့ကြီးများတည် လူနေမှုဘ၀တို့လည်းမြင့်ခဲ့ကြပြီ။
၁၇ရာစုလယ်၏ စက်မှုတော်လှန်ရေးမှစကာ မိခင်သဘာဝအားစိတ်ကြိုက်ထိခိုက်စော်ကားပြီးနောက် ယခုခေတ်ရောက်သော် အချို့သူကား သဘာဝတရားဟုအသံနက်နှင့်ဟစ်၍အော်သည်။ အချို့ကား အော်လျှက်မှ ထိခိုက်စော်ကားနေဆဲ၊
ကမ္ဘာထိပ်တန်းအစိုးရကြီးတို့မှာကား အဖြေမထုတ်ပေးနိုင်သည့်”အစိမ်းရောင်”နိုင်ငံတကာအစည်းအဝေးများအထပ်ထပ်ကျင်းပလျှက် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံလေးများဖက် လက်ညိုးတွင်တွင်ထိုးနေကြပါလေသည်။
မီဒီယာအစွမ်းဖြင့်လည်း ရိုက်သွင်း၏။ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များအားဖြင့်လည်း ကွင်းဆင်းစည်းရုံးသည်။ အမေရိက၊ စိန့်ပြည်၊ ဂျပန်၊ ဂျာမဏီ၊ အင်္ဂလန် စသည့်စက်မှုနိုင်ငံကြီးများကိုယ်နှိုက်ကား အမှန်တကယ်တွင် မလျှော့ရေးချ လျှော့ပေးမမူ..။
အဖမြန်မာနိုင်ငံတော်သည် ကမ္ဘာ့ရာသီဖေါက်ပြန်မှုခံရခြင်းတွင် အဆိုးဝါးဆုံး ခံစား၁၀နိုင်ငံထဲမှ ဒုတိယအဆိုးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်နေပါလေပြီ။ တရားခံမည်သူနည်း၊ သို့ဖြင့် မြန်မာတို့၏ ဘိုးဘွားဘီဘင်တို့အမွေတို့ တတိတိ ဖြတ်ချရောင်းစားခံနေရသည်။ သစ်တောကြီးများပြုတ်ပြုတ်ပြုန်းလာသည်။ သယံဇာတတို့အား ရေဖြင့်ဖျော်ချ ထုတ်နှုတ်ယူသည်။ တောမှီတောရိုင်းသတ္တ၀ါများအား မှောင်ခိုထုတ်သည်။
ရသောအမွေငွေတို့ဖြင့် မိမိတို့၏ပိုင်ဆိုင်ခြင်း အာဏာရယူလိုခြင်းများအတွက် ဗမာနှင့် ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတို့ စစ်တိုက် မြေလုကြသည်။
စစ်တိုက်ရာတွင်သုံးသော လက်နက်ခဲယမ်းတို့မှာကား အဆိုပါ ပထမနိုင်ငံကြီးများမှ ၀ယ်ယူကြခြင်းဖြစ်ပါသတည်း။
အမိဧရာဝတီမြစ်ကြီးကို “သူတို့”ကယ်တင်ခိုင်းကြပြန်လေသည်။ တကယ်တော့ ဧရာဝတီ၊ချင်းတွင်း၊သံလွင်မြစ်ကြီး၃သွယ်သည် အာရှ၏ရေထုရင်းမြစ်မျှော်စင်ကြီးဖြစ်သော ဟိမ၀န္တာတောင်ကြောမှရေခဲပျော်ရေများကို အဓိကမှီခိုရပ်တည်နေရခြင်းသာဖြစ်သည်။ တောင်ကြောနေရေခဲပျော်မြစ်များကိုမှီခိုရပ်တည်ရသောနိုင်ငံ ၈နိုင်ငံတွင် အဖမြန်မာပြည်ပါသည်။
လက်တွေ့အချက်အလက်၊ ဂြိုလ်တုဓာတ်ပုံအရကောက်ကြည့်ပါလျှင်တော့ ဧရာဝတီ၏ မြောက်ဖျားဒေသရေဝေရေလဲတောကြီးများ လျှော့နည်းပြုတ်ကုန်ပါပြီ။ ကမ္ဘာ့ရာသီပူနွေးမှုကြောင့် တဆောင်းခိုကာ စုထားရသော ဟိမ၀န္တာတောင်ကြောနေ ရေခဲ၊နှင်းခဲတို့လည်းလျှော့နည်းကုန်ကာအရေပျော်ရန်ရေခဲထုလက်ကျန်လည်းနည်းကုန်ပြီ။
ရွှေ၊ကျောက်စိမ်းတူးခြင်းတို့တွင် ဖျော်ချသော မြေစာခဲတို့ကြောင့် မြစ်ကြီးလည်းဗွက်ထ သောင်ထွန်းလှပြီ။
အချို့နေရာများတွင် ရာဇ၀င်တွင်မရှိစကောင်း ဧရာဝတီကို လမ်းလျှောက်ဖြတ်ကူးသွားနိုင်ကြပြီဖြစ်ပါ၏။
ထိုမှ “ဧရာဝတီကို ကယ်တင်ကြ”အသံဇောင်းကြီးကားဟစ်ဆဲ။
မြန်မာတို့ မှားခဲ့ဖူးလိမ့်မည်။ အဆုံးသတ်နှစ်ဖြတ်တခု(၁၀စုနှစ်)စီအား အဆုံးဖြတ်ရလဒ်အဖြစ်ယူပါသော်မူ မြန်မာတို့၏မဟာဗျူဟာကျကျအမှားများကို သိမြင်နိုင်ပါသည်။
ဒို့မြေ ဒို့ပြည်ဝယ် စေတီ၊စပါး၊ ကျောက်သံပတ္တမြား၊ရေနံသတ္တုအစုစုတို့အပြင် မြိုင်ရဂုံသစ်တော ရေကန်အင်းအိုင်ချောင်းမြောင်းမြစ်ကြီးတို့ရှိပါ၏။
ရှိပါလေလည်း တမွဲမွဲဖြစ်သည်မှာ လူတို့၏အတွေးအခေါ် လုပ်ရပ်မှားတို့ကြောင့်သာလျှင်ဖြစ်ပါအံ့။
မအောင်မြင်ခဲ့သည်တို့ နိဂုံးတို့တိုင်ပါစေရန် ဥာဏ်ရှေ့ပန်း၍ တ၀မ်းတစိတ်ညီစွာ ပြင်ကြပါလေ။
မြစ်တို့ကိုဆည်ပါ။ ထိမ်းသိမ်းပါ။ ရေကာတာတို့ဆောက်ပါ။ ရေချိုနှင့်အတူ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်အပိုဆုရပေလိမ့်။
သံယောင်မလိုက်ကြပါလင့်။ မိမိတိုင်းပြည်အကျိုးစီးပွားကို ဦးစွာကြည့်လှည့်ပါ။ နောက်များမှကမ္ဘာကြီး ချောက်ထဲမကျမှီလက်တလုံးအလိုတွင် ကယ်တင်ကြပါလေ။ ။
.ဟုတ်တယ် သဂျီး၊ အခု မျှစ်ကြော် ထွက်တဲ့ နှစ်ဘ၀နှစ်ကန္တာ လည်း ဒီမြစ်ကိစ္စပဲ။ စိန့်လောရင့်မြစ်ကို စွမ်းအင်ထုတ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့ လွှတ်တော်အမတ်ဟာ ဒေသခံ ကွန်ဆာဗေးတစ်တွေရဲ့ ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲ အမြင်ရယ်၊ ဘဘုန်းတို့ဘက်မှာ တစ်ရွာလုံးရှိနေတာရယ်ကြောင့် သူအရှုံးပေးခဲ့ရတယ်။ လူလည်တစ်ယောက်က အိမ်ကြက်ချင်း အိုးမဲသုတ် ပေးပြီးအပိုင်စီးလိုက်တယ်။ အဲဒီတော့မှ တစ်ရွာလုံး ခံခဲ့ရတယ်။ ဧရာဝတီ မြစ်ကိစ္စမှာ ဒေသခံ တွေဖြစ်တဲ့ လစ်ဘရယ်နဲ့ ကွန်ဗေးကို ခေါင်းချင်းဆိုင်တိုက်ပေးပြီး အရင်းရှင်က နေရာဝင်ယူရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ လစ်နဲ့ ကွန်ဗေး ကျောချင်းကပ်ပြီး ကိုယ့်အတွက်ကျန်အောင် လုပ်ရမှာလေ။ တစ်ခု သတိထားမိလား မသိဘူး။ ဒီဧရာဝတီမြစ်အကြောင်း စတင်ပြီး ဟောပြောခဲ့တဲ့စာရေးဆရာက မောင်စိန်ဝင်း (ပုတီးကုန်း) ထင်တယ်။ အဲဒီ ဆရာကို တရုတ်က ဆုတစ်ခုပေးလိုက်တယ်။ ဂျာနယ်ထဲမှာ သတင်းတိုလေးတစ်ခုအဖြစ်ပဲ ဖတ်လိုက်ရတယ်။ သေချာကိုးကားပြီး မပြောနိုင်ဘူး။ မှားသွားရင် ကာယကံရှင်တွေကို ဆောရီးပါနော်။
.ဧရာဝတီကို စွမ်းအင် ထုတ်ကိုထုတ်ရမှာ။ ထုတ်တဲ့အခါ ကိုယ့်အတွက် ကျန်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ သူတို့က အိမ်ကြက်ချင်း အိုးမဲသုတ်ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
ယူအက်စ်က.. စိန့်ပြည်ကို ပိတ်ဆို့ဖို့မဟာဗျူဟာကျကျအကွက်ရွေ့တယ်..။ စိန့်ပြည်ကို ကိုရီးယား၊ဂျပန်၊ထိုင်ဝမ်၊ဗီယက်နမ်၊ အိန္ဒိယတွေဖက်ကပိတ်ဆို့ပြီးပြီ၊ ပွင့်ကျန်နေတဲ့ မြန်မာပြည်ကို စိန့်တိုင်းသားတွေအ၀င်ကြမ်းလွန်းသမျှ.. ၀င်ဝင်ဟန့်တယ်..။ အရှေ့အလယ်ပိုင်း အာရပ်ဒေသမှာ စိန့်ပြည်ပါဝင်စွက်ဖက်မှုအတိုင်းအတာနဲ့.. အပေးအယူလုပ်.. အကျိုးစီးပွားလဲကစားတယ်..။
မြစ်ဆုံကိစ္စနောက်မှ.. ကေအိုင်အေနဲ့မြန်မာတပ် ပြည်တွင်းစစ်ပြန်ဖြစ်တာမို့.. တွက်တာမမှားရင်..
– ကေအိုင်အို/အေ ဟာ သူ့နယ်မှာမြစ်ဆုံစီမံကိန်း လုပ်ခွင့်ပြုပေးလိုက်တဲ့အတွက် စိန့်ပြည်ဆီက ငွေရပြီးဖြစ်လိမ့်မယ်။
– ဦးသိန်းစိန်မတိုင်မှီ စစ်အစိုးရထိပ်တန်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးများကလည်း.. အပေးအယူ လာဘ်ငွေရပြီးဖြစ်လိမ့်မယ်။
– ၂၀၁၀ အစိုးရသစ်အပြောင်းမှာ အကျိုးစီးပွားအဝေမတဲ့တော့တာမို့ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရဟာ လူထုဆန္ဒပြတာအကြောင်းပြ.. စီမံကိန်းကိုရပ်ပစ်လိုက်တာဖြစ်လိမ့်မယ်။
– စိန့်ပြည်ဟာ ဆည်စီမံကိန်းမှာ ငွေရင်းနှီးမြုတ်နှံတာကပြန်ရမယ့်ငွေထက် .. ဆည်အကြောင်းပြု ပိုင်ဆိုင်သွားမယ့်… အဲဒီနယ်က သယံဇာတတွေကိုထုတ်ယူပြီးရတဲ့ငွေကို ပိုအာရုံစိုက်လိမ့်မယ်။
– ယူအက်စ်ဟာ “၀င်ဝုန်း”လိုက်တဲ့အနေနဲ့ အိမ်ကြက်ချင်းအိုးမဲသုတ်ခွပ်ခိုင်းပြီး.. ပွဲဖျက်လိုက်တာသာဖြစ်တယ်လို့ … ထင်..။
.. စစ်ထတိုက်ကြရ.. သေကြရတဲ့.. ဗမာတပ်နဲ့.. ကေအိုင်အေတပ်ကတော့.. အကောင်အထည်ဖေါ်ပေးရတဲ့.. နယ်ရုပ်ကလေးတွေလို့သာ…လို့.. ပြောလို..။
ရယ်စရာပြောရရင်တော့.. ကေအိုင်အေဟာ.. သူရထားတဲ့ဝေစုငွေတွေနဲ့..စိန့်ပြည်ကလက်နက်ပြန်ဝယ်ပြီး.. ဗမာတပ်ကလည်း.. လူထုငွေတွေနဲ့..စိန့်ပြည်ကလက်နက်ဝယ်ပြီးချနေကြတာပါပဲ..။
လူထုကတော့ ဆည်ဟူသမျှဆိုးဝါးစွထင်ပြီး.. ဆန္ဒချည်းပြအကျင့်ဆိုးဝင်သွားတော့တာပဲ..။
အပိုဆုအဖြစ်.. ကိုယ်ကငပိရေတောင်နပ်မမှန်ပဲနဲ့… ဆီဦးထောပါတ်အကောင်းတွေလျှံပယ်စားနေကြတဲ့( နိုင်ငံကြီးတွေဖျက်စီးထားတဲ့..) ကမ္ဘာကြီးကိုကယ်တင်ပါတောင် ဖြစ်ကုန်ကြသေး..။
.ဒီပုံအတိုင်းဆို အမေစု သမ္မတ မဖြစ်ရင် ပိုကောင်းဦးမယ်။ မဟုတ်ရင် ဓားခုတ်ရာ လက်ဝင်လျှိုချည်း ဖြစ်နေမှာ။
ကျွဲနှစ်​​ကောင်​ ခတ်​တဲ့ကြားက ​မြေဇာပင်​​တွေ​ပေါ့ အဲ့ဂလိုဆို ဒါမှမဟုတ်​ အင်းအားကြီး သတ္တဝါ ​တွေ စားကျက်​လု တာ ကြားထဲက ထိတ်​လန့်​​နေကြတဲ့ ယုန်​က​လေး ရှဉ့်​က​လေး​တွေ​ပေါ့ ပြည်​သူ​တွေက ။ ဆိုလိုတာက ကျ​နော်​တို့အား ကျ​နော်​တို့ အက်​​လေးနဲ့ ဘာတစ်​ခုမှမဖြစ်​နိုင်​​တော့ဘူးလား ။
လူထုအားက.. သာရမှာပေါ့..။ သန်း၅၀ကျော်တာပဲဟာ…။
-Abraham Lincoln (November 19, 1863)
ပြဿနာက.. အင်အား တဂိုဏ်း၅သိန်းစီမကရှိတဲ့..အစိမ်းနဲ့အ၀ါဂိုဏ်းသားတွေ..လွှမ်းမိုးထားမှုကို… အရင်ကျော်နိုင်မှသာဖြစ်မယ်လို့ထင်..။
ဒဂျီးက စီအိုင်အေ တလျှိုလားဟင်င်င်
ကျူပ်က…သူများ ဓားခုတ်ရာလက်ဝင်လျှိုပေးရတဲ့.. ဓလျှိုတော့ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်..။
ဟိုမှာ.. ဧရာဝတီကိုကယ်တင်ကြစာတမ်း တကမ္ဘာလုံးပို့ပေးလိုက်တဲ့.. ယူအက်စ်ကန်ပိန်းဖေါ်ဘားမား ဖောင်ဒါ.. ကိုအောင်ဒင်ကြီးတယောက်လုံး.. ရန်ကုန်ရောက်နေတဲ့ဟာပဲ.. ဟာကို..ပဲဟာပဲကို…နော..။
ဧရာဝတီကို ကယ်တင်ကြစို့ – အောင်ဒင် –
Posted by kai on Jul 9, 2011 in Critic, Politics, Issues |
Credit to U Ravika
အတာရေနဲ့ သင်္ကြန်အကြောင်း တစေ့တစောင်း
ဒီနေ့ သင်္ကြန်ပွဲအကြောင်းစဉ်းစားမိတယ်။ သင်္ကြန်ပွဲဟာ ထေရဝါဒ စစ်သလားလို့ တွေးမိတယ်။ သင်္ကြန်တွင်းမှာ အတာရေကို ပက်ဖြန်းလို့ နှစ်ဟောင်းက မကောင်းမှုများကို ဆေးကြောပစ်ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီအယူက ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာ မပြောနဲ့၊ ဘယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဓလေ့ထုံးစံနဲ့မှ မတူပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ မကောင်းမှုကို ရေနဲ့ ဆေးကြောလို့ မရပါ။ အကျင့်နဲ့သာ ဆေးကြောနိုင်တယ်မဟုတ်လား။
အတာရေပက်ဖြန်းတာ၊ သင်္ကြန်ထမင်း ချက်တာ၊ တံခွန်ကုက္ကားနဲ့ ကလသာအိုး ပူဇော်တာဟာ ဘာယဉ်ကျေးမှု ဖြစ်နိုင်မလဲ။ ရေနဲ့ ပက်ဖြန်းပြီး မကောင်းမှုကို ပယ်ဖျောက်နိုင်တယ်ဆိုတာ ဟိန္ဒူဘာသာမှာ တွေ့ရှိတတ်တဲ့ အယူအဆပါ။ ဒါဖြင့်ရင် အတာရေယဉ်ကျေးမှုက ဟိန္ဒူနွှယ်နေတယ်လို့ ပြောလို့ ရနိုင်ပါသလား။ တကယ်လို့ အဲ့လို ပြောနိုင်တယ်ဆိုရင်-
(၁) ဟိန္ဒူက ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုထဲကို စိမ့်ဝင်လာသလား၊
(၂) ဗုဒ္ဓဘာသာတွေက ဟိန္ဒူတို့ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကို မောင်ပိုင်စီးလိုက်တာလား၊
(၃) ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက နှစ်ပေါင်းများစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ကြပြီး ယဉ်ကျေးမှုအရ ပေါင်းစည်းသွားခဲ့သလား
စဉ်းစားစရာ ရှိလာပါတယ်။ သမိုင်းနောက်ခံကို ပြောဖို့ လိုလာပါတယ်။ မြန်မာတို့က သင်္ကြန်ဆိုတာ ပုဂံခေတ်နရသီဟပတေ့မင်းလက်ထက်မှာ စတင်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ နရသီဟပတေ့မင်းကို တရုတ်ပြေးမင်းလို့လည်း ခေါ်ပြီး ပုဂံရဲ့ နောက်ဆုံးမင်းတစ်ပါးပါ။ သင်္ကြန်မှာ ရေကစားနေတဲ့ မိဖုရားစောလုံကို နောက်မိရာ မိဖုရားစောလုံက ဘုရင်ကို သတ်ဖို့ ကြိုးစား၊ ဘုရင်က အချိန်မီ သိ၊ သူ့မိဖုရားကို အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့သတ်တဲ့ ဇာတ်လမ်းပါ။ ဘုရင်ကိုယ်တိုင်က တရုတ်စစ်ကို ပြေးရင်း မွန်တို့ဒေသ ဒလနယ်မှာ ခိုလှုံခဲ့ပါတယ်။ ရှင်ဒိသာပြာမောက်ရဲ့ သံတမန်ရေးအရ တရုတ်က ဆုတ်ခွာသွားတဲ့အခါ ပုဂံကို အပြန် ပြည်မြို့အရောက် သူ့သားက အဆိပ်ကို သောက်ခိုင်းခဲ့လို့ နတ်ရွာစံခဲ့ရသူပါ။ ဒီတော့ ဒီဘုရင်လက်ထက်မှာ သင်္ကြန် စခဲ့တယ်လို့ ပြောခြင်းမှာ ယုတ္တိကင်းမဲ့တယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ နရသီဟပတေ့မင်းမတိုင်မီက ပုဂံခေတ်ဦးမှာတောင် သင်္ကြန်ယဉ်ကျေးမှု ရှိနေမှာ အသေအချာပါပဲ။
ရခိုင်တို့ကတော့ သင်္ကြန်အစ မဟာမြတ်မုနိက လို့ ဆိုကြပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရားသက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်ကပဲ မြတ်စွာဘုရားက ရခိုင်ပြည်ကို ကြွရောက်ခဲ့ကြောင်းပါရှိပြီး မဟာမြတ်မုနိကို ရေသပ္ပါယ်ရာကနေ သင်္ကြန်ပွဲ စတင်ခဲ့ပါကြောင်း ရေးကြတယ်။ ထူးဆန်းပုံမှာ အဆိုပါဘုရားကြွရောက်လာပုံမှာ မွန်တို့နဲ့ထပ်တူ ရေးထားပါတယ်။ ဓညဝတီနဲ့ သုဓမ္မဝတီသာ ကွာပါတယ်။ ရခိုင်တို့က ဓညဝတီပြည်၊ မွန်တို့က သုဓမ္မဝတီ လို့ ဆိုပါတယ်။
မွန်တို့က တိုင်းပြည်က အခါခါ ပျက်ခဲ့ရလို့ သမိုင်းအရင်းအမြစ်တွေ ပျောက်ကွယ်လုနီးနီးပါ။ ဒါပေမဲ့ အတာသင်္ကြန်ဆိုတဲ့ အမည်ကို ထောက်ပြီး သင်္ကြန်အစ မွန်တို့က ဖြစ်ကြောင်း ဘာသာဗေဒအရ ဆိုကြပါတယ်။ အတာရေလို့ ပြောတဲ့အတွက် ＂အတာ＂ဆိုတာ မွန်စကားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာရဟန်းတော်အချိူ့က ＂အန္တာ＂ဆိုတဲ့ ပါဠိပုဒ်ကနေ ဆင်းသက်ကြောင်း ကြံဆခြင်းမှာ မှားယွင်းပါတယ်။ ဖျာပုံကို ဖျာတွေ ပုံနေတဲ့ မြို့၊ ဒိုက်ဦးကို တိုက်ဦး၊ ဘန်ကောက်ကို ပန်းကောက်၊ ပုသိမ်ကို ပသီတွေးသလိုမျိုးပါ။ မမှန်ပါဘူး။ နောက်ပြီး မဟာဗြဟ္မာကို ပူဇော်တဲ့အိုး၊ ဗိဿနိုးကို ပူဇော်တဲ့အိုး စတဲ့ အိုး(၅)လုံးကို မွန်တို့ဒေသမှာပဲ ပြုလုပ်ကြပါတယ်။ နောက်ပြီး သင်္ကြန်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သင်္ကြန်ဓလေ့ကို အကောင်းဆုံး ထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့လူမျိုးထဲမှာ မွန်တို့က ထိပ်ဆုံးမှာ ရှိနေပါတယ်။
၁။ မွန်တို့ရဲ့ အတာရေဟာ ကုန်ဆုံးစေခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ပေးခြင်းအဓိပ္ပါယ်ရှိခြင်း၊
၂။ မွန်တို့ရဲ့ သင်္ကြန်ထမင်းဟာ အိန္ဒိယဟန် နွှယ်ခြင်း၊
၃။ ငရုတ်ကြီးကြော်ပုံမှာ အခုထိ အိန္ဒိယဟန်အတိုင်း ရှိနေသေးခြင်း၊
၄။ သိကြားမင်းနဲ့ ဗြဟ္မာ့ဦးခေါင်းကို ကလသာအိုး(အတာအိုး)နဲ့ အခုထိ ကြိုဆိုနေခြင်းကို
ထောက်ပြပြီး မွန်တို့ဆီက စတင်ခဲ့ကြောင်း ဆိုကြပါတယ်။ ကမ္ဘောဒီယား၊ ထိုင်း၊ လာအိုမိတ်ဆွေများကို သင်္ကြန်အကြောင်း တီးခေါက်ကြည့်တော့ မွန်တို့အယူနဲ့ ပိုမိုနီးစပ်ပြီး မွန်တို့လောက် မပြည့်စုံတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ သင်္ကြန်ကို ကျင်းပသူတိုင်းက –
(၁) ဗြဟ္မာမင်းနဲ့ သိကြားမင်းတို့ (၈)ရက်နဲ့ (၇)ရက်အကြောင်း အငြင်းအခုံ ဖြစ်ပုံနဲ့ ဗြဟ္မာ့ဦးခေါင်းဖြစ်အင် ဂနေသှ်ျကဇာတ်လမ်းစဉ်ကို အတူတူ ယုံကြည်ကြတယ်။
(၂) သင်္ကြန်ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရဟာ သက္ကတစကားလုံးကနေ ဆင်းသက်လာပြီး ရာသီခွင်တစ်ခုကနေ အခြားတစ်ခုကို ကူးပြောင်းခြင်းဖြစ်ကြောင်း အတူတူ ယုံကြည်ကြတယ်။
(၃) သင်္ကြန်အချိန်မှာ သိကြားမင်းက လူ့ပြည်ကို ဆင်းလာပြီး ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုသူများကို ရွှေပုရပိုက်နဲ့ မှတ်တမ်းပြုစုကာ မကောင်းမှုပြုသူများကို ခွေးသရေနဲ့ ရေးမှတ်သွားကြောင်းကိုလည်း အတူတူ ယုံကြည်ကြတယ်။
(၄) သင်္ကြန်တွင်းမှာ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များမှာလည်း မြန်မာ၊ ထိုင်း၊ လာအိုနဲ့ ကမ္ဘောဒီယားတို့မှာ လုံးဝနီးပါး ဆင်တူကြပါတယ်။
အထူးသဖြင့် အိန္ဒိယနဲ့ အရှေ့တောင်အာရှဆက်ဆံရေးကို အလေးထားသင့်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ အရှေ့တောင်အာရှမှာ အိန္ဒိယပြုမှုကို အများဆုံး ခံရတဲ့ လူမျိုးတစ်မျိုးကို အခြေခံစဉ်းစားရပါ့မယ်။ ဒီလိုစဉ်းစားလိုက်တာနဲ့ ခမာ(ကမ္ဘောဒီယား)လူမျိုးတို့ဟာ ဟိန္ဒူအယူဝါဒနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အိန္ဒိယမှုအပြုခံရဆုံး ဖြစ်ပြီး ဗုဒ္ဓအယူဝါဒနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မွန်တို့ဟာ အများဆုံးအပြုခံခဲ့ရပါတယ်။ အခြားအိန္ဒိယပြုမှုတွေ ခံကြရတဲ့ နိုင်ငံများဟာ ပျူမြို့ပြနိုင်ငံများနဲ့ အင်ဒိုနီးရှားရှိမြို့ပြနိုင်ငံများ ဖြစ်ကြပါတယ်။
ဒီအုပ်စုတွေကို ခွဲကြည့်တဲ့အခါ ပျူလူမျိုးတစ်မျိုးကပဲ ကဒမ္ဗအက္ခရာကို ယူသုံးခဲ့ပြီး အခြားလူမျိုးများအားလုံးဟာ ပလ္လဝအက္ခရာကို ယူသုံးခဲ့ရပါတယ်။ မွန်၊ ခမာ၊ ဇဝါလူမျိုးများဟာ မိမိတို့စာပေ၊ ပါဠိစာပေ၊ သက္ကတစာပေတို့ကို ပလ္လဝအက္ခရာနဲ့ပဲ မှတ်တမ်းတင်ကြပါတယ်။ ပျူလူမျိုးတို့ကျတော့ သူတို့စာပေကို ကဒမ္ဗအက္ခရာနဲ့ ရေးကြပါတယ်။ ရခိုင်တို့ကျတော့ ဒေဝနာဂရီနဲ့ စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ပလ္လဝနွှယ်တဲ့ အက္ခရာကိုကျတော့ နောက်ပိုင်းကျမှသာ တွေ့ရပါတယ်။ နောက်ပြီး ပျူစာပေမှာ သက္ကတလွှမ်းမိုးမှု အားနည်းပြီး မွန်၊ ရခိုင်၊ ခမာ၊ ဇဝါတို့မှာ သက္ကတသြဇာက ပါဠိထက် ပိုများပုံကိုလည်း လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် သင်္ကြန်ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရဟာ ပုဂံက စတင်ခဲ့ဖွယ် မရှိဘဲ သက္ကတအားသန်တဲ့ ဒေသကနေ စတင်လာမှာ ဖြစ်သလို သင်္ကြန်ပွဲဟာလည်းပဲ ဒီကနေ စတင်ခဲ့ဖွယ် ရှိပါတယ်။ နောက်ပြီး မွန်နဲ့ ခမာလူမျိုးတွေရဲ့ အိန္ဒိယဒဏ္ဍာရီပုံပြင်များကလည်း ခ္ပွတ်စွပ်တူကြတယ်ဆိုတော့ သင်္ကြန်နဲ့သူတို့က ပိုနီးစပ်ကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အတာသင်္ကြန်ကာလမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ဟိန္ဒူဘာသာတို့က ရောနှောနေကြခြင်း ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
သထုံ၊ လော့ဗူရီ၊ အန်ကောဝတ် စတဲ့ အရပ်တွေမှာ ရှိတဲ့ ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေကို ကြည့်တော့လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ဟိန္ဒူဘာသာတို့ အတူ ယှဉ်တွဲနေထိုင်ခဲ့ကြကြောင်း တွေ့ရှိနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်။ နောက်ပြီး ထေရဝါဒနိုင်ငံများမှာပဲ သင်္ကြန်ကာလ တူညီနေကြခြင်းမှာလည်း သတိထားဖွယ်ပါ။ မဟာယာန အားသန်လွန်းတဲ့ တိဗက်၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဗီယက်နာမ်တို့မှာ ဒါမျိုး သိပ်မတွေ့ရပါဘူး။ ထေရဝါဒ ထွန်းကားခဲ့ရာ သီရိလကာင်္၊ တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ်၊ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ လာအိုနိုင်ငံ၊ ကမ္ဘောဒီယားနိုင်ငံနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတို့မှာ ဒီဓလေ့ကို အများဆုံးတွေ့ရတော့လည်း ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာဟာ အများက ဝေဖန်သလို အမြင်ကျဉ်းတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ရပ် မဟုတ်ပါဘူး။
အရင်တုန်းက လူသေလူဖြစ် ဦးဥက္ကဋ္ဌ၊ နောက် မိုးပြာဦးညာဏတို့က ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကို အများနဲ့ မရောနှောတဲ့ ဘာသာတရား၊ အတွေးအခေါ်တွေကို ချောင်ပိတ်ထားတဲ့ ဘာသာတရား၊ ဟိန္ဒူလွှမ်းမိုးမှုကို ခံရတဲ့ ဘာသာတရားတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ချင်ကြပါတယ်။ အမှန်မှာ အဲ့လို မဟုတ်ပါဘူး။ အတာသင်္ကြန်ဆိုတာ ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ဟိန္ဒူဘာသာတို့ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ခဲ့ကြကြောင်း သက်သေတစ်ခု ဖြစ်တယ်လို့သာ ဆိုချင်ပါတယ်။
အလားတူကို ပြောရရင် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ အရင်က ဟိန္ဒူတို့မှာ ဝေဒကျမ်းတွေပဲ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဥပနိသျှဒ်အပါအဝင် ဘယ်ကျမ်းမှာပဲ ကြည့်ကြည့်ပါ၊ အဘိဓမ္မာသဘောတရားကို တွေ့ရတာ မရှိပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ သနန္တနတရားဟာ ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာကို အများကြီး အခြေခံထားကြောင်း တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ မြတ်ဗုဒ္ဓကို နဝမမြောက် ဗိဿနိုးဝင်စားသူအဖြစ် သတ်မှတ်ရတယ်ဆိုကတည်းက ဟိန္ဒူတို့အပေါ် မြတ်ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာရဲ့ လွှမ်းမိုးပုံကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အတာသင်္ကြန်ရောက်တိုင်းမှာ ရိုးရာအမွေအနှစ်ကို ထိန်းသိမ်းရသလို ဘာသာတရားအားလုံး အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေးပွဲတော်တစ်ခု ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း သတိချပ်စေချင်ပါတယ်။ ကိုင်း အပြင်သွားစရာ ရှိလို့ ဒီစာကို ဒီမျှနဲ့ပဲ ရပ်လိုက်မယ်။ မင်္ဂလာနှစ်သစ်လေး ဖြစ်ကြပါစေ။
သင်္ကြန်ကာလတွင်းမို့.. သင်္ကြန်အကြောင်းမို့.. စိမ်းထားလိုက်ပါတယ်..။
မွန်ဘုန်းကြီးဆိုလိုထားတာက.. သင်္ကြန်က.. မွန်ကလာသလိုလိုဖြစ်နေပေမယ့်.. အဆုံးသတ်တော့.. ဟိန္ဒူအယူရှိတဲ့.. အိန္ဒိယကလာတာပါပဲလို့.. သဘောပေါက်မိပါတယ်..။
Timeline ချရေးရင်တော့.. ကမ္ဘာ့သာသနာကြီးတွေထဲ.. ဟိန္ဒူဝါဒကအစောဆုံးမို့.. အိမ်နီးချင်းမြန်မာအပေါ်… ဟိန္ဒူဝါဒဟာအိမ်ရှင်ဝါဒသဖွယ်အရင်ရောက်နေမယ်လို့.. တွေးတာမဆန်းပါ..။
ဒါကို.. တလောကတင်.. အသောကမင်းမြေးရဲ့..အရှေ့တောင်အာရှကိုဟိန္ဒူအင်ပါယာချဲ့ခဲ့တဲ့.. မြေပုံနဲ့တကွတင်ပေးဖူးပါတယ်..။
ထပ်ဖြည့်ချင်တာကတော့… မြန်မာတို့ရဲ့ထေရ၀ါဒ (ထေရီ၊ထေရာကြီးများရဲ့ဝါဒ) မှာ.. ထေရီပြုတ်ထားခဲ့ပြီမို့..(ကျုပ်အခေါ်) ထေရာဝါဒဟာ.. ဟိန္ဒူအယူ.. ရောသမမွှေနေတာ.. အတူတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ခဲ့တာ… နှစ်၂ထောင်ကျော်နေပြီဆိုတဲ့..သက်သေအဖြစ်.. သင်္ကြန်ကို… ယူကြည့်လို့ရကြောင်းပါခင်ဗျား..။
( ဒီနရာမှာ.. ဗုဒ္ဓဘာသာက..ဟိန္ဒူထဲဝင်ရောတာလား.. ဟိန္ဒူဘာသာကဗုဒ္ဓဘာသာထဲဝင်ရောနေတာလားကိုတော့.. မပြောလိုပါ..မပြောလိုပါ..)
နေရူး-ဂန္ဒီအမျိုးတွေဆိုတာ… ဟိန္ဒူသာသနာ.. အင်မတန်ကို ယုံကြည်လိုက်နာသူပါ..။
သူ့အမျိုးတွေကလည်း.. ကမ္ဘာသိအဆက်ဆက်.. ဟိန္ဒူတွေပါ…။
ဆိုတော့.. အောက်ကသတင်းဖတ်ကြည့်ရင်.. ဟိန္ဒူကြီးဦးဂိုအင်ဂါပြုစုရိုက်သွင်းပေးသွားတဲ့.. မြန်မာ့တ၇ားစခန်းတွေကို.. ဟိန္ဒူတွေဘယ်လိုမြင်ထား..သဘောပေါက်ထားသလည်း.. ဖမ်းမိလ်ိမ့်မယ်..။
မှတ်ချက်။ ။ ဂေါတမဘုရားရှင်လက်ထက်က.. ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ… လူဖြစ်ဖြစ်.. ရဟန်းဖြစ်ဖြစ်.. တရားစခန်းသွင်းတာမရှိ….ရေးချ… မရှိ..။
ထပ်ဆင့်မှတ်ချက်။ ။ မြန်မာ ဟိုက်ဘရစ်သာသနာကိုထောက်ပြလိုရင်းသာဖြစ်ပြီး.. ဟိန္ဒူတို့ရဲ့ ယောဂ..ကသိုဏ်း.. ၀ိပဿနာ… ကျင့်စဉ်တွေအပေါ်.. ဝေဖန်ပြောလိုရင်း.. မဟုတ်..။
New Delhi: Congress Vice President Rahul Gandhi finally returned to Delhi after his nearly two-month long sabbatical on Thursday. The Congress came under fire after Rahul went onaleave on February 22,aday before the crucial Budget session started.
အခု.. မြန်မာပြည်သင်္ကြန်… တဲ့..။
တစ်ချို့က ခေါင်းမဖော်နိုင်အောင် မီးသတ်ပိုက်နဲ့ ထိုးထားပြီး တစ်ချို့က ပါလာတဲ့ ကလေးမလေးတွေကို ဟိုကိုင် ဒီနှိုက် လုပ်ကြသေးသတဲ့။
ဒါညိုးက ကြုံဖူးမှ သိတာကလား
လွန်​ဒါရှိရင်​ ၀န်​ဒါမီယာမှာ ​နေရပါဇီ အစ်​မ​တော်​
ရဲတိုက်နဲ့ တူတဲ့ ကောင်လေးကို နှိုက်ကြတာပဲညော်
သူကြီးအခု​စောနက အရမ်း​ရေစီးသန်​တဲ့ မြစ်​ကြီးတခုကို​ရောက်​ခဲ့တယ်​
Tiger leaping george ဆိုလားပဲ
ပင်​လယ်​​ရေမျက်​နှာပြင်​ တ​သောင်း​ကျော်​​လောက်​က​နေ ကမ်းပါးစွန်း​တွေဖြတ်​ပြီး
နိမ့်​လိုက်​မြင့်​လိုက်​ ဖြစ်​​တော့ ဦး​နှောက်​ငြိမ်​​အောင်​ အချို​တွေစား​နေရတယ်​
မနက်​ဖြန်​ Base camp သွားပြီ
Haba ရွာက အရမ်းလှတာပဲ ​လေက​တော့အ​သေကြမ်းတယ်​
လာမည့် ၁၅ နှစ်တွင် ကမ္ဘာ့လူဦးရေ ၁ ဒသမ ၁ ဘီလီယံအထိ တိုးတက်မည်ဟု ကုလသမဂ္ဂပြောကြား
ကုလသမဂ္ဂ ဧပြီ ၁၄
ကမ္ဘာ့လူဦးရေသည် ၂ဝ၁၅နှင့် ၂ဝ၃ဝ ခုနှစ်အကြားတွင် (၇ ဒသမ ၃) ဘီလီယံမှ (၈ဒသမ ၄ )ဘီလီယံအထိ တိုးတက်များပြား လာမည်ဟု ခန့်မှန်းထားရာ ယင်းလူဦးရေ တိုးပွားများပြားလာမှု ပြဿနာရပ်များကို ၂ဝ၁၅ခုနှစ်လွန် ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ထဲတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်ကြောင်းဖြင့် ကုလသမဂ္ဂက ဧပြီ ၁၃ ရက်တွင် တိုက်တွန်းခဲ့သည်။
အဆိုပါ သတင်းအချက်အလက်ကို လက်ရှိနှင့်အနာဂတ် ကမ္ဘာ့လူဦးရေအလား အလာနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအပေါ် လူဦးရေ၏ ဂယက်ရိုက်ခတ်မှု ဟူသော ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဧပြီ ၁၃ရက်က ဖွင့်လှစ်ကျင်းပသော (၄၈)ကြိမ်မြောက် ကမ္ဘာ့လူဦးရေနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ ကော်မရှင်အဖွဲ့၏ အစည်းအဝေးမှထုတ်ပြန်ခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတကာ အသိုက်အဝန်းသည် စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးရေး ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် ပြည့်မီရေးအတွက် ကြိုးပမ်းအားထုတ်သွားမည်ဖြစ်ရာ လက်ရှိကမ္ဘာတွင် ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည့် လူဦးရေ အကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲမှုက ယင်းဖွံ့ဖြိုးရေးရည်မှန်း ချက်ပန်းတိုင်ကို လွှမ်းမိုးသွားနိုင်ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းက လူဦးရေနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ ကော်မရှင်အဖွဲ့သို့ ပေးပို့သည့် အမှာစာထဲတွင် ဖော်ပြထားသည်။
တိုးတက်လာမည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည့် ယင်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလူဦးရေ၏ ၁ ဒသမ ၁ ဘီလီယံခန့်မှာ မြို့ပြဒေသများတွင် ဖြစ်ပေါ် လာမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဥရောပတိုက်မှအပ ကမ္ဘာ့ဒေသအားလုံးရှိ မြို့ပြနေလူဦးရေ တိုးတက်မှုနှုန်းမှာ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း သို့မဟုတ် ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းအထက်ဖြင့် စံချိန်တင် တိုးပွားလာမည်ဟု ခန့်မှန်းရကြောင်း ဘန်ကီမွန်း၏ အမှာစာထဲတွင် ဆက်လက်ဖော်ပြ ထားသည်။
ကမ္ဘာ့လူဦးရေ၏ ထက်ဝက်ကျော်မှာ မြို့ကြီးများတွင် နေထိုင်ကြရာ ယင်းမြို့ကြီးနေ လူဦးရေအချိုးအစားမှာ လာမည့် ၁၅ နှစ် အတွင်း တိုးပွားလာနိုင်ကြောင်း၊ သို့ဖြစ်ရာ မြို့ပြနေပြည်သူများ၏ အကျိုးအမြတ် များအတွက် သင့်မြတ်အောင်ဆောင်ရွက်ပေး ရေးနှင့် စိန်ခေါ်မှုများအား ကျော်လွှားနိုင်ရေးအတွက် အရေးတကြီးကြိုးပမ်း အားထုတ်သွားရန် လိုအပ်ကြောင်း ဘန်ကီမွန်းကထပ်မံဖော်ပြသည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ကမ္ဘာ့ပြည်သူဦးရေ ကို ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်တွင် ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ လာမည့် ၂ဝ၃ဝ ခုနှစ်တွင် ၁၆ ရာခိုင်နှုန်း စသည်ဖြင့် တိုးတက်လာမည်ဟု ခန့်မှန်းထား ရာ ကမ္ဘာ့ကလေးသူငယ်ဦးရေ နှစ်ဘီလီယံ ခန့်သည် လာမည့် (၁၅) နှစ်အတွင်း ကျောင်း နေအရွယ်သို့ရာက်ရှိလာကြမည်ဟု ခန့်မှန်းထားကြောင်း ဘန်ကီမွန်းက မှတ်ချက်ပြုသည်။
ကလေးသူငယ်များအတွက် ပညာရေးမြှင့်တင်ပေးရေး၊ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုသေချာစေရေး၊ သင့်လျော်သော အလုပ်အကိုင်များဖန်တီးပေးရေးသည် ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်လိုအပ်ကြောင်း၊ ထို့အတူ အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအနေဖြင့် ၎င်းတို့ နှင့်ထိုက်တန်ရာ လူမှုအကာအကွယ်ပေးရေးနယ်ပယ်များတွင် အပြည့်အဝပါဝင်ဆောင် ရွက်နိုင်ရေးအတွက် လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းများကိုလည်း မိမိတို့အဆင့်တိုးမြှင့်ရမည် ဖြစ်ကြောင်းဖြင့် ဘန်ကီမွန်းက ပြောကြားသည်။
ချောက် ဧပြီ ၁၃
သောက်သုံးရေရှားပါးလျက်ရှိသော ကျေးရွာများဖြစ်သည့် ချောက်မြို့နယ် မြေနီလိန်ကျေးရွာနှင့် ကန်သာကျေးရွာများသို့ ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး
ဦးစီးဌာနမှ ဧပြီ ၉ ရက်တွင် ရေဖြန့်ဝေပေးလှူခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
သောက်သုံးရေများကို မနောဖြူရေသယ်ယာဉ်ကားဖြင့် မြေနီလိန်ကျေးရွာရှိ အိမ်ခြေ ၄၅အိမ်ရှိ လူဦးရေ ၂၇ဝ နှင့် ကန်သာကျေးရွာရှိ အိမ်ခြေ ၄၇၊ လူဦးရေ
၂၉၈ ဦး စုစုပေါင်းလူဦးရေ ၅၆၈ ဦးနှင့် ကျွဲ၊ နွား တိရစ္ဆာန်များအတွက် အပါအဝင် ရေဂါလန် ၉၆ဝဝ အား ပေးဝေလှူဒါန်းပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ရေရှားပါးခြင်းကြောင့် ဥပုသ်စောင့်သွားတဲ့အခါမှာတောင် ရေမချိုးရဘဲသွား
ရကြောင်း၊ နွားတွေတောင် တစ်နေ့တစ်ကြိမ်သာရေသောက်ရကြောင်း၊ အဲဒီတစ်
ကြိမ်သောက်ဖို့ရန်အတွက် နှစ်မိုင်ခန့်ဝေးသည့် ရေရှိသည့်နေရာသို့သွားရောက်
ရေတိုက်ရကြောင်း၊ ယခုလို ရေအခက်အခဲဖြစ်နေချိန်တွင် လာရောက်လှူဒါန်း
ပေးတဲ့အတွက် အဆင်ပြေကြောင်း မြေနီလိန်ကျေးရွာပြည်သူ ဦးထွန်းလင်းက ပြောသည်။
ယခင်ကလည်း ရေရှားပါးသည့်ကျေးရွာများသို့ ရေများဖြန့်ဝေပေးခဲ့ပြီးဖြစ်
ကြောင်း၊ ယခုလည်း အဆိုပါကျေးရွာများသို့ ရေများဖြန့်ဝေပေးသည့်အပြင် ရေရှားပါးသည့်ကျေးရွာများသို့လည်း အလှည့်ကျသွားရောက်၍ရေများ ဖြန့်ဝေ
ရှိသူတစ်ဦး၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
ရမည်းသင်း ဧပြီ ၁၃
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရမည်းသင်းမြို့ ဝါတိုးအရှေ့
ရပ်ကွက်၊ ဝါတိုးအလယ်ရပ်ကွက်၊ ကြည်တော်ကုန်း
ရပ်ကွက်များသို့ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ ဧပြီ ၁ဝ ရက် နံနက် ၁ဝနာရီတွင် စတင်လိုက်လံ၍သောက်
ကန်သစ်ရေပေးရေးမှမြို့ပေါ်ရပ်ကွက်ရေဖြန့်ဝေခြင်းလုပ်ငန်းကိုလွန်ခဲ့သောနှစ် ၄ဝခန့်က စတင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ယခုနှစ်ကန်သစ်အတွင်းရေများလျော့နည်ခန်းခြောက်နေချိန်တွင် မိုးတွင်းကာလရေများ ပိုမိုသိုလှောင်နိုင်ရန်အတွက် ကန်သစ်အား ပြန်လည်တူးဖောခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ စည်ပင်သာယရေးရေပေးဝေနေသော ပိုက်လိုင်းမှ ရေဖြန့်ဝေနိုင်ခြင်း
မရှိ အခက်အခဲကြုံတွေ့နေရသည့်အပြင် ပုဂ္ဂလိကပိုင်ရေပေးဝေနေသော ပိုက်လိုင်းမှလည်း ရေလုံလောက်စွာပေးဝေနိုင်ခြင်းမရှိသည့်အတွက် အခက်အခဲကြုံတွေ့နေရသည်။
ထို့ကြောင့် ကန်သစ်မှ ရေဖြန့်ဝေပေးနေသော မြို့နယ်
အင်ဂျင်နီယာတို့မှ စည်ပင်သာယာရေးပိုင်ကားဖြင့် သောက်သုံးရေများ အဆိုပါ ရပ်ကွက်များအတွင်းသို့
နေ့စဉ်အခမဲ့ဖြန့်ဝေပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။
ရေချိုထိန်းဖို့ လျှပ်စစ်ထုတ်ဖို့ မြစ်ဆုံဆည်ဆောက်ရပါမယ်ဆိုရင်တော့…
ဘူမိဗေဒပညာရှင်ရှူထောင့်ကနေ ပြတ်ပြတ်သားသား ကန့်ကွက်ပါတယ် …
ပိုက်ပိုက်ရှိရင် ဘေးအန္တရာယ်နဲအောင် ဆောက်လို့ရတယ် ဆိုပေမည့်…
ဧရာဝတီဟာ စစ်ကိုင်းပြတ်ရွေ့ပေါ်ထိုင်ထားတာမို့ ဆည်ပိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်…
နိုင်ငံသားတိုင်းလည်ပင်းကို Time Bomb တစ်လုံးစီ ချိတ်ပေးလိုက်တာနဲ့ အတူတူပဲ…
မနှေးအမြန် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာ ရေမြောကမ်းတင် ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် …
ဘာကြောင့် မတည်သင့်လဲ ခရေစေ့တွင်းကျ ရေးပြချင်ပေမည့် …
Technical Terms တွေပါမှာမို့ စာလေးပြီး ပျင်းစရာကောင်းမှာရယ် …
ဘူမိဖြစ်စဉ်တွေက စ ပြီး လက်ကုန်နှိုက်ရမှာမို့ ၊ အခုအထိ ရေးလိုက်ဖျက်လိုက်…
ကိုလိုရာဒိုမြစ်ကြီးမှာ ဆည်၄၄ခုဆောက်တုံးကသာ.. ကိုရင့်လိုပညာရှင်ထွက်လာရင်.. အမေရိကန်တွေလည်း ရေမရမီးမရနဲ့… ယက်တောင်လေးခပ်နေလို့ရပြီထင်..။
အလောင်းအစားပေါ့…။ ရေယူမလား..။မီးယူမလား..။ ခြေထောက်ထောင်အိပ်မလား..။
အမေရိကန်တွေကတော့.. ပြတ်ရွေ့ပေါ်မှာထိုင်ပြီးကို.. ဆောက်လိုက်တဲ့ဆည်တွေ..။ သူတို့အလောင်းအစားက.. နောင်ခါလာနောင်ခါဈေးဖြစ်ပုံရ..။
Posted in: Earthquakes, News/ Current Events, Prepping. Tagged: Arkansas, disaster scenarios, Earthquake, earthquakes, Earthquakes Increasing, fault zone, Illinois, Indiana, Kentucky, major earthquake, Michael T. Snyder, Mississippi, Missouri, New Madrid, New Madrid Earthquake, new madrid fault, new madrid fault line, New Madrid fault zone, New Madrid Seismic Zone, Preparedness, Prepper, preppers, Tennessee, United States. Leaveacomment
ဟဲ ဟဲ…. ဆည်ဆောက်ပြီး ကောင်းကျိုး ဆိုးပြစ်ဆိုတာ
ဆယ်စုနှစ်ချီပြီးမှ သိတာ သဂျီးရဲ့ …
San Andreas Fault ပေါ်မှာ Technology နိုင်ရင် ဆောက်လို့ရတယ်ဆိုပြီး ဆောက်လိုက်ကြတာ ၊ ငလျင်လှုပ်လို့ ဆည်ရေလည်း ပြည့်အောင်ဖြည့်မရ ၊ Evaporation နဲ့ ရေတွေလည်း ခမ်း ၊ Greenhouse Effect နဲ့ Drought ဖြစ်ကုန်လို့ အခု သဂျီးတို့တောင် ရေဘေးဒုက္ခသည် ဖြစ်နေဟာမင့်… ဧရာဝတီကို သေဖော်မညှိပါနဲ့ဗျာ…
ကျောက်(စ) ပြောတာ ထောက်ခံတယ်။
ဆည်ဆောက်ပြီး ကတည်းက အဲဒီ ဆည်တွေ ခန်းခြောက်ပြီး အလုပ်မဖြစ်တဲ့ နေရာတွေ ပြည့်လို့။
၁၀ တန်းတုန်း ကများ ကျက်လိုက်ရတဲ့ ဆည် တွေ။
ဒီ အစိုးရလက်ထက်မြန်းးး ဘာလုပ်ဖို့မှ မြှောက်မပေးကြပါနဲ့ တဂျီးရဲ့။
မညှိပါဘူး…။ အမေရိကမှာ.. ဆည်ပေါင်း ၇သောင်းခွဲ..။
မြန်မာပြည်မှာ.. ဆည်အခု ၂၀၀ ဆိုတာပဲ..။
List of dams and reservoirs in the United States – Wikipedia …
မှတ်သားစရာတွေချည်းပဲ ဖတ်ရတာတန်ဘိုးရှိပါပေ့ သို့သော် နိုင်ငံနဲ့ လူမျိုးအတွက် မြစ်ဆုံ စီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်သင့်တယ်ဆိုတော့ ဘာဖြစ်ဖြစ်တွေးစရာလေးတွေရလို့ ကျေးဇူးပါ
ဆည်ဆောက်တိုင်း မကောင်းဘူးလို့ မျက်စေ့စုံပိတ်ပြီး မငြင်းပါဘူး…
ဥပမာ … သံလွင်မြစ်ကို တာဆန်းမှာ ဆည်ပိတ်ပြီး လျှပ်စစ်ထုတ်မယ်…
ဘူမိအနေအထားရ တည်သင့်တဲ့နေရာ ၊ ငလျင်ကြောလည်းလွတ်…
အိမ်ခံကျောက်ကလည်း အနေအထားကောင်း ၊ ရေဝေရေလဲသစ်တောတွေလည်းရှိ…
(မြန်မာဘက်မှာ သိပ်မရှိပေမည့် ၊ ထိုင်းဘက်မှာ ထိန်းထားတဲ့သစ်တောရှိတယ်)
ရေစီးကြမ်းတဲ့ သံလွင်ကို ထိန်းပြီးသားဖြစ်တာမို့ မကန့်ကွက်ပါဘူး…
ဒါတောင် မပြေးသော် ကန်ရာရှိ ၊တခုခုဖြစ်ရင် အမြည်းစားရမှာမို့ …
EGAT (Electricity Generating Authority of Thailand) က လက်တွန့်နေသေးသဗျ…
ဧရာဝတီကို မြစ်ဆုံမှာဆည်ပိတ်ဖို့က လားလားမှ မအပ်စပ်တဲ့ အကြံပါ…
အောက်ခံ အိမ်ခံကျောက်က Metamorphic ၊ ငလျင်ကြောကလည်းရှိ…
သွယ်ဝိုက် ဘေးအန္တရာယ်ကလည်း များပါဘိနဲ့… အဆိုးဆုံးက…
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်မှာ ရေငံပေါက်ပြီး တနိုင်ငံလုံး အငတ်ဘေးဆိုက်သွားမယ်…
မယုံမရှိနဲ့ ဧရာဝတီကို ဆည်ပိတ်ရင် မကွေးလောက်အထိ ရေငံထိုးမှာ…
မြစ်ဆုံဆည်စီမံကိန်းဆီက.. စိန့်ပြည်ကဘာလိုချင်နိုင်သလည်းတောင်.. ကော်မန့်ထဲမှန်းရေးထားသေး…။
ဧရာဝတီအပါအ၀င်..မြန်မာ့ ရေချိုမြစ်တွေအကုန်.. မြစ်တလျှောက်.. ဆည်တွေ.. ဆောက်ကြဖို့လိုကြောင်းပြောချင်တာဗျ..။
စွမ်းအင်မရှိပဲ.. ရေချိုမလောက်ငှပဲ.. တိုင်းပြည်တခုဘယ်လိုထူထောင်ကြလည်း.. တွေးလို့မရ..။
ယူအက်စ်.. အယ်အေမှာ.. ပြီးခဲ့တဲ့.. ၁၀နှစ်လောက်ကတည်းက.. မြို့တော်က.. မြစ်တွေရေတွေမြင့်တက်လာတော့မယ်ဆိုပြီး.. မြစ်ကမ်းတွေကွန်ခရစ်ဖို့.. တံတားတွေလိုက်မြှင့်နေတာ.. မနက်ကဆိုအကုန်ပြီးသလောက်ဖြစ်သွားပြီ..
ကမ္ဘာနွေးလာလို့.. ရေခဲတွေပျော်.. အဲဒီရေတွေက..ပင်လယ်ရေကို.. မြင့်လာမှာမို့.. မြစ်တွေ.. ချောင်းတွေ..မြောင်းတွေကတဆင့်… ဆားငန်ရေတွေဝင်လာမှာမို့.. ပြင်ဆင်တာဆိုတာပဲ..။ အသိမမှားရင်.. ဖလော်ရီဒါကလည်း.. လုပ်နေတာပဲ..။
ဧရာဝတီက.. ဆည်.. .ရေထိန်းတခါး.. အဆင့်ဆင့်ဆောက်ထားပြီး.. ရေချိုတွေဆည်ထားလိုက်ပေါ့..။
မြစ်ဝ.. ပြည်လောက်.. မှာ.. ပင်လယ်ဝမှ.. ဖျာပုံမှာ.. ဒေးဒရဲမှာ..
အမ်စတာဒမ်လိုမြို့ကြီးတောင် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်လယ်ဗယ်အောက်မှာ တည်နိုင်သေးတာပဲ..။ နတ်မစွမ်း လူမပေါ့..။
မဖြစ်လာသေးတွေကို.. တွေးပူနေကြတာထက်စာရင်.. ဖြစ်နေတာတွေကို.. လက်တွေ့ကျကျရှင်းစေချင်ပြီ..။
ဘာသာတရားအရမ်းကိုင်းရှိုင်းတဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် အသိတစ်ယောက်ပြောတာ သွားသတိရမိတယ်။
သူတို့ဘာသာရဲ့ ဆုံးမချက်နဲ့ဆိုရင် သောက်သုံးလို့ရတဲ့ ရေချိုတွေကို အလဟဿ ဖြုန်းတီးရာရောက်လို့ သင်္ကြန်ရေပက်တာ ငရဲကြီးတယ်တဲ့။
မြန်မာနိုင်ငံက သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးသမား တဦးကို နိုင်ငံတကာက ထင်ရှားတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆုကြီးတခုကို ချီးမြှင့်လိုက်ပါတယ်။
မြစ်ဆုံဆည်တည်ဆောက်ရေး ဆန့်ကျင်လှုပ်ရှား ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ ဧရာဝတီမြစ် ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့က ကိုမြင့်ဇော်အနေနဲ့ Goldman ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆုကြီး ချီးမြှင့်ခံလိုက်ရတယ်လို့ ဒီကနေ့ ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ ဆုပေးပွဲကိုတော့ ဒီညမှာ San Francisco မြို့မှာ ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီး၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညမှာတော့ ၀ါရှင်တန်ဒီစီမှာ ထပ်လုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ တရုတ်နိုင်ငံက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ ဒီဆည်ကြီးကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ အရေးအပါဆုံးနဲ့ အရှည်ဆုံး ဧရာဝတီမြစ်ကြီးကို ပျက်စီးစေနိုင်ပြီး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုနဲ့ လူမှုဘ၀ ရပ်တည်မှုတွေကို ပျက်ပြားစေနိုင်တယ်လို့ ကိုမြင့်ဇော် အပါအ၀င် မြန်မာနိုင်ငံက ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးသမားတွေက ဝေဖန်ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
လူသားတို့သည် ဘ၀လူနေမှုအဆင့်မြင့်မားရေးအတွက်ရည်ရွယ်ရင်းနှစ်ရာချီကာ သဘာဝတရားကို မုဒိမ်းကျင့်ခဲ့ကြသည်။ …တဲ့…. တင်စားချက်လေး…. က ဆက်ဆီကျတယ်…
ခေတ်၏စီးကြောင်းတွင် အခြေအနေအချိန်အခါပေး၍ ယဉ်ကျေးမှုမူလသဘောအရ စီးမြောပြောင်းလဲနေကြသည်ကို ….
အဲဒီ စာပိုဒ်မှာ စီးမြော ဆိုတာကို စီးမျောနဲ့ အစားထိုးသင့်တယ်ထင့်….
သဝေထိုး > မ > ယရစ် နဲ့ မြော တာက… မေ့မြောတာ… (တနည်း) သေလုမြောပါး ဖြစ်တာကို ဆိုလိုတဲ့နေရာမှာ သုံးသင့်တယ်ထင့်…
မကို ယပင့်နဲ့ မျောတာက မျော ပါတာ.. မျှောလိုက်လို့ မျောတာ..
ဒီတလ ထုတ်မယ့် သတင်းစာကတော့ … ရှယ် ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။
ကျနော်တို့ ပြည်တွင်းမှာ ခေတ်စားနေတဲ့ စကားအရဆို..အထူးပေါ့…
ထုတ်တာတောင် နောက်ကျနေပြီဆိုတော့ …အခုထိ …. ခန့်သည်ထက်ခန့်အောင် ဖန်တီးနေတယ်ထင့်….
အင်းလေ… ဒီလ ထုတ် သတင်းစာက… တကယ့် ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်တယောက်လက်ထဲလည်း…အခန့်သား ရောက်ဦးမှာကိုး…
ကျနော်တော့ ရန်ကုန်ပြန်ရောက်ကတည်းက အခုထုတ်မယ့် သတင်းစာ ဖတ်ချင်လွန်းလို့…
.မေးလ်ထဲ…ပို့ပြီလားဆိုပြီး ကြည့်ရတာ အမော…